I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Fazhil
Ifulethi linendawo yokulala engu-2 (master en suite) esitezi esiphansi seyunithi esanda kwakhiwa efinyeleleka kalula kuBukasa Road (etiyeleni) endaweni yaseBukasa, imizuzu emi-5 nje ukusuka eMuyenga Hotel International, Kabalagala, kanye ezinye izindawo ezishisayo.
Ukupaka kuyatholakala futhi kumahhala, futhi ngaphezu kwendawo evikelekile eseduze/eduze komgwaqo omkhulu, sinesistimu ye-alamu ezenzakalelayo (esebenza ebusuku kuphela) ngokuphepha kwakho okwengeziwe.
Ngiyethemba ukuthi izithombe ziyazikhulumela.
Khumbula, i-WiFi inhle.
Uma ungowase-Uganda, noma ujwayele ukuya e-Uganda, usuvele uyazi ukuthi iBukasa neMuyenga eseduze enezindawo ezithokozisayo njengeKabalagala (ikhona elingalali), iGgaba neMunyonyo yonke imizuzu ukusuka lapho - indawo ongahlala kuyo.
Kukhona umnakekeli wesikhathi esigcwele esizeni ongasiza nganoma yiziphi izidingo eziphuthumayo - kodwa futhi ngihlala ngitholakala ngocingo, i-imeyili - ukukhetha kwakho.
UFazhil Ungumbungazi ovelele